Burma Associated Press (BAP) ၏ “နွေဦးမျှော်လင့်ချက်” အမည်ရ အက်ဆေးကို နွေဦးကိုကို… – PVTV Myanmar
Burma Associated Press (BAP) ၏ “နွေဦးမျှော်လင့်ချက်” အမည်ရ အက်ဆေးကို နွေဦးကိုကို က ခံစားရွတ်ဆို တင်ဆက်ထားတာ နားဆင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Like – 5K Share – 297
Gűññèř Kô Aŭñĝ says:
2021-06-27 at 8:33 PM
2021-06-27 at 8:34 PM
မာယာ ခင် says:
2021-06-27 at 8:37 PM
ဒီစာကို ရေးရင် ဆဲကြတော့မယ် ဆိုတာ သိပါတယ်။ မရေးမဖြစ်မို့ ရေးရတော့မယ်
PDF ကိစ္စပါ။ PDF မှာ ၂ မျိုးရှိတယ်။ NUG က တည်ထောင်ပြီး စစ်သင်တန်းပေးနေတဲ့ PDF နဲ့ မြို့နယ်အသီးသီးမှာ လူငယ်တွေက ကိုယ့်ဘာသာစုဖွဲ့တဲ့ PDF ဆိုပြီး ၂ မျိုးရှိတယ်။ အားလုံးဟာာ မအလစစ်မိစ္ဆာတွေကို အမြစ်ဖြတ်မယ့် ပြည်သူ့သူရဲကောင်းတွေ ဆိုတာ ငြင်းချက်ထုတ်စရာ မရှိဘူး။ သက်စွန့်စံဖျား ဆောင်ရွက်နေကြတာ အားလုံး အသိပဲ ဖြစ်တယ်။
မီဒီယာတွေက ရောထွေးရေးကြတယ်။ လူတွေကလည်း ရောထွေးပြီး ပြောဆိုကြတယ်။ ၂ မျိုးကို ကွဲပြားအောင် NUG က ဖွဲ့တဲ့ PDF ကို Gov. PDF ၊ မြို့နယ်လူငယ်တွေ စုပြီး ဖွဲ့တဲ့ PDF ကို Local. PDF လို့ ခေါ်ပါရစေ။
PDF ဆိုတဲ့ နာမည်တူတယ်။ ရည်ရွယ်ချက် တူတယ်။ စိတ်ဓာတ်လည်း တူတယ်။ ဘာမှ မကွဲပြားဘူး။ ဒါပေမယ့် လုပ်နည်းလုပ်ဟန် မတူကြဘူး။ အဲဒီမှာ ပြဿနာ စတော့တာပဲ။
Gov. PDF ဟာ professional army တခု ပုံစံနဲ့ စစ်ဥပဒေတွေ၊ နိုင်ငံတကာ ဥပဒေတွေ၊ စံနှုန်းတွေနဲ့ နိုင်ငံတကာနဲ့ ချိတ်ဆက်လှုပ်ရှားနိုင်ဖို့ အထိ ရည်ရွယ်တယ်။ အစိုးရစစ်တပ်ပဲ။ NUG အစိုးရကို အသိအမှတ်ပြုတဲ့ နိုင်ငံတွေဆီက လက်နက်တွေဝယ်မယ်။ နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေဆီက စစ်ရေး ထောက်ပံ့ငွေတွေ ၊ လူမှုကယ်ဆယ်ရေးထောက်ပံ့ငွေတွေ လက်ခံရမယ်။ ဒီလို လက်နက်ဝယ်တဲ့အခါ ၊ ထောက်ပံ့ငွေတွေ လက်ခံတဲ့အခါ ငွေလွှဲ banking စနစ်ကို ဖြတ်သန်းရမယ်။ နိုင်ငံတကာက အကြမ်းဖက်အဖွဲ့လို့ သံသယဝင်သွားရင် အဲဒီလမ်းကြောင်းတွေ အကုန်ပိတ်ပြီး ဘာမှ လုပ်မရတော့ဘူး။
Local. PDF ကတော့ revolutionary army ပုံစံပဲ။ တော်လှန်စစ်လို့ ခေါ်တယ်။ ရဲခေါင်ပျောက်ကြားတပ်တွေပဲ။ သူပုန်တပ်ပဲ။ ရရာလက်နက်ကို စွဲကိုင်ပြီး တွေ့ရာ သင်းချိုင်း ဓားမဆိုင်းပဲ လျှပ်တပြတ် လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ရေးတွေ လုပ်ကြရတယ်။ ဘယ်နိုင်ငံ ဘယ်အစိုးရရဲ့ အသိအမှတ်ပြုတာ မပြုတာ ထည့်မတွက်ဘူး။ အခွင့်အရေးရရင် ရန်သူ့ဒေါက်တိုင်တွေကို တတိတိ ရှင်းပစ်ရင်း အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရားကို ဖျက်ဆီးပစ်ရတယ်။
2021-06-27 at 8:41 PM
Phyo Htet San says:
Ma Pyae says:
2021-06-27 at 8:46 PM
ပြောချင်တာအဲဒါမရောင်ရာဆီလူးနေတာ အဓိကမအလနိုင်ဖို့လေ ဘာတွေညာတွေအတွက်အချိနိပေးမနေနဲ့
မိုး ေသာက္ says:
2021-06-27 at 9:28 PM
2021-06-28 at 6:35 AM
Jue Column says:
2021-06-28 at 9:08 AM
ဂ်ဳံခြမ္လဘန္း ဂ်ဳံခြမ္လဘန္း says:
2021-06-28 at 9:27 AM
2021-06-28 at 10:42 AM
2021-06-28 at 3:23 PM
Myo Hset Aung says:
2021-06-29 at 1:28 PM
Phyo Wai Maw says:
2021-06-30 at 12:23 PM
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးစာစဉ် အတွဲ(၁) အမှတ…